China yakakwenenzverwa aruminiyamu foil bhegi aruminiyamu foil yekuvhara bhegi inogona kuve yakagadzirirwa chikafu kurongedza bhegi tii kurongedza bhegi yakachena aluminium foil bhegi fekitori uye vagadziri | Kunyengera
Thickened aruminiyamu foil bhegi aruminiyamu foil yekutsiva bhegi inogona kuve yakagadzirirwa chikafu kurongedza bhegi tii kurongedza bhegi yakachena aluminium pepa bhegi
Clo65d yakachena aruminiyamu firimu iri multilayer yakakwira chipingamupinyi uye kubaya nemishonga zvinhu zvakagadzirwa naume. Chigadzirwa chine hunhu hunotevera: sirivheri chena chitarisiko, opaque, inoratidzira, yakasimba michina zvivakwa, yakakwira anti kuputika kuita, anti kubaya kubvarura kuita, anti-static, nezvimwe.
Chigadzirwa chakaedzwa neGG uye ASTM zviyero, uye chigadzirwa chinosangana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza (rechitatu bato bvunzo bvunzo rinogona kupihwa). Izvo zvigadzirwa zvinosangana neyakaomesesa kuchengetedza kwezvakatipoteredza zviyero zveEuropean Union neNorth America. Zvinoenderana nezvinodiwa, izvo zvinhu zvinogona kuitwa mumatanho matatu kana mana, uye zvigadzirwa zvine akasiyana macomputer zvinhu uye ukobvu zvinogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa, uye pamusoro payo panogona kudhindwa chero chero ruvara.
Iyo yakajairwa yekuchengetedza nharaunda ndeiyi: tembiricha ≤ 38 ℃, mwando ≤ 90%. Mucherechedzo wekusimbisa ndeye 10mm kusangana nezvinodiwa mumusika.
1. Inokodzera mhando dzese dzemabhodhi edunhu, zvigadzirwa zvemagetsi, chaiyo michina accessories, zvinoshandiswa, zvigadzirwa zvemaindasitiri, nezvimwe.
Semuenzaniso: PC bhodhi, IC yakasanganiswa wedunhu, zvigadzirwa zvemagetsi, SMT chip yezvakasiyana maindasitiri eUS, mwenje wekuturika, chaiyo Hardware, auto zvikamu zvekutakura, nezvimwe.
2.Food kurongedza: mupunga, nyama zvigadzirwa, hove dzakaomeswa, zvigadzirwa zvemumvura, nyama yakaporeswa, yakagochwa dhadha, chikafu chakaomeswa, ham, chikafu chakabikwa, mwaka, nezvimwe.
Hunhu (bvunzo nzira) Avhareji kukosha
Yakazara ukobvu 0.01mm ~ 0.02mm
Tensile simba / GB / T 1040.3-2006) 50MPA
Elongation pazororo （GB / T 1040.3-2006) 80%
Kupisa kwekuvhara mamiriro
Kupisa 150 ℃
Nguva 3 ~ 5seconds
Pamusoro impedance <10 的 1010
Mvura yemvura inosvinwa ASTM F1249-2006) 1.023g-m3.d）
Oxygen kutumira ST ASTM D3985-2005) 0.075cm3（Stp） / (m2.d）
Pashure: 3 G 5 g 10 g 100 g silica gel yakajeka granule desiccant
Zvadaro: Humidity chiratidzo kadhi inogadzira yakagadziridzwa 6-poindi humidity kadhi kuchengetedza kwezvakatipoteredza
Kavha Bubble Bhegi, Anti Static Bubble Mucheka, Mutsvuku Wekutsvuka, Mask Mugadziri, Imwe Dhonza Imwe Mask Machine, Chiso Mask Machine,